235KGS Baling Wire, Shina 235KGS Baling Wire Manufacturers, mpamatsy, orinasa - Ningbo Judin Special Monofilament Co., Ltd
Fomba fanapahana borosy
Wire fanaovana plastika
Home>Products>Wire fanaovana plastika
Tape trondro nylon
Tape trondro vy
Loharano miondrika amin'ny fantsom-trondro
Manampia: # 3 Ind & Td Road, Jishigang Industrial Park, Yinzhou District, Ningbo, 315171, PR China
Halavany isaky ny coil: 13 000m
Lanja isaky ny metatra: 0.018 kg
Dimension ny horonana: φ 1100 x 430mm
Fialana volo amin'ny halavany: 5000 N
Fialana volo amin'ny tadiny amin'ny fatotra: 4800 N
Elongation amin'ny fiatoana amin'ny lavany iray: 15%
Elongation amin'ny fiatoana miaraka amin'ny fatotra: 9%
RDF, na Refuse Derived Fuel, dia mampiasa teknolojia mamokatra angovo avy amin'ny fako tsy mety amin'ny fanodinana nentim-paharazana. Ny fahafantarana ny filàn'ny tariby mibontsina izay mety amin'ny RDF, dia namolavola ny vokatra izay mety amin'ny fako fanaovana volo ho an'ny tanjona fandoroana.
Rehefa mibontsina sy mametaka fako matanjaka ho an'ny fandoroana olona dia tsy maintsy esorina ny tariby vita amin'ny vy mahazatra alohan'ny hanombohana ny doroana. Asa mafy sy lafo ity.
Ny JUDIN Plastika tariby vaovao napetrak'i Judin sy novokarin'i Judin dia azo dorana mandritra ny dingan'ny fandoroana olona manome lanja sahaza.
Halava isaky ny coil: 13000 m
Tensile tapaka amin'ny halavany: 5000 N
Fialana volo amin'ny tadiny miaraka amin'ny fatotra: 4800 N
Elongation amin'ny fiatoana amin'ny fatotra: 9%
Ny balalesa dia azo ampidirina amin'ny lafaoro feno fonosana tsy misy fidirana an-tsehatra izay hamonjy fotoana sy vola be amin'ny fanatsarana ny rafitra fanodinana.
Natolotra tamin'ny kofehy 13000 Meter, milanja 235 kg fotsiny, izay mitovy amin'ny tariby vy 750 kg eo ho eo. Noho izany, rehefa apetaka amin'ny RDF / SRF Baler miaraka aminà fehezan-tsakafo fananana (izay azo atao milahatra) dia mihena be ny fikirakirana sy ny tahirin'ny asa natao mba hatakalo Reels, izay tombony ho an'ireo miasa.
Ny Reel tsirairay dia matetika mamokatra balana 2800 (mifototra amin'ny haben'ny bale 1.2m X 1m X 1m) ary hamonjy fotoana be dia be ho an'ireo miasa. Ny Judin Plastika Wire dia manana fantsom-pandrefesana mitovy amin'ny tariby vy ambany ary azo antoka / matanjaka ampiasaina.
Ny fampiasana JUDIN Plastika Wire dia manilika ny sazy izay omen'ny ankamaroan'ny mpamorona vovo-tany eropeana haka ny tariby vy ao amin'ny fatana fandoroany, ka mamonjy vola ankehitriny.
Ireo mpanjifa mampiasa JUDIN Plastika Wire dia hanokatra toerana / fotoana hafa hikarakarana ny fitaovan'izy ireo.
Masinina manapaka bozaka bozaka Round Trimmer Line
Aoka ho voalohany ho fantatrao momba ny vokatra farany ananantsika
Adikao ankavanana © 2021 Ningbo Judin Special Monofilament Co., Ltd.